10 Izinto Zemihla ngemihla ezikhupha iRadioation
Ngaba uya kumangaliswa ukuba ufumene imveliso yomsakazo kunye nokutya imihla ngemihla? fStop Izithombe - Jutta Kuss, Getty Images
Uvezwe kwi- radioactivity imihla ngemihla, ngokuqhelekileyo ukusuka ekudleni kwakho kunye nemveliso oyisebenzisayo. Nantsi ukukhangela kwezinye izinto eziqhelekileyo zemihla ngemihla ezichanekileyo. Ezinye zezinto zingabangela umngcipheko wempilo, kodwa ezininzi zazo ziyingxenye engenakulimala kwimeko yakho yansuku zonke. Phantse kuzo zonke iimeko, ufumana ukukhanya okukhulu kwimizila emitha xa uhamba ngomqwembe okanye ufumana i-x-ray yamazinyo. Sekunjalo, kukuhle ukwazi imithombo yovulo lwakho.
Amantongomane aseBrazil asebenza ngeeRadiyo
UJennifer Levy / Getty Izithombe
Amantongomane aseBrazil mhlawumbi ayidla ngokusasaza kakhulu. Banikela nge-5 600 pCi / kg (ii-picocuries kilogram) ye-potassium-40 kunye ne-1,000-7,000 ye-pCi / kg ye-radium-226. Nangona i-radium ingagcinwa ngumzimba ixesha elide, ama-nut anamawaka angamawaka ama-radioactive ngaphezu kokunye ukutya. Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba i-radioactivity ibonakala ingaveli kwii-radionuclides eziphezulu emhlabeni, kodwa kunokuba zivela kwiinkqubo ezinzulu zemithi.
Jack Andersen / Getty Izithombe
Ubhiya abukodwa ngokusasazekayo, kodwa ibhiya enye iqulethe, ngokuqhelekileyo, malunga ne-390 pCi / kg ye -isotope ye- potassium-40. Zonke ukutya eziqukethe i-potassium zinezinye ze-isotope, ngoko unokukhetha ukucinga oku ngondlo kwibhiya. Kwezinto eziluluhlu, ibhiya mhlawumbi yinto encinci ye-radioactive, kodwa kuyamangalisa ukuqaphela ukuba, ngokwenene, kushushu. Ngoko ke, ukuba unokwesaba isiselo esinamandla seChernobyl kule movie "I-Hot Tub Time Machine," unokufuna ukucinga kwakhona. Kungaba izinto ezilungileyo.
I-Kitty Litter I-Radioactive
Inkunkuma yeCatter eyenziwe ngodongwe okanye i-bentonite iyancipha. GK Hart / Vikki Hart, Getty Images
I-litter inokwanela nge-radioactive ukuba inokukhupha izixwayiso ze-radiation kuma-checkpoints angamazwe ngamazwe. Enyanisweni, akusiyo yonke i-cat litter okumele uyikhathazeke ngayo-kuphela izinto ezenziwe ngodongwe okanye nge-bentonite. I-isotophi e-radioactive ngokwemvelo isenzeka ngobumba kwisantya malunga ne-4 pCi / g ye-i-isotopes ye-uranium, i-3 pCi / g ye-isotopes ye-thorium kunye ne-8 pCi / g ye-potassium-40. Umphandi e-Oak Ridge Associate Associates wabalwa ukuba abathengi baseMerika bathenga iipirani ezingama-50 000 ze-uranium kunye neepiliyamu ezingama-120 000 ze-thorium ngendlela ye-litter nganye ngonyaka.
Oku akuyiyo ingozi enkulu kwiikati okanye kubantu babo. Nangona kunjalo, kukho ukukhululwa okukhulu kwama-radionuclides ngendlela yefuthe lesilwanyana kwiinkati eziphathwe ngumhlaza nge-radiosotopes. Ukunika into ekucinga ngayo, kunene?
Ubhanana Ngokuqhelekileyo i-Radioactive
I-Banar Fil Ardhi / EyeEm / Getty Izithombe
Ubhanana buphezulu ngokwemvelo kwi potassium. I-Potassium idibanisa i-isotopes, kuquka i-isotope ye-radio-potassium-40, ngokunjalo amabhanana akancinci. Ubhanana obuninzi buphuma malunga nokubola kwe-14 ngomzuzwana kwaye luqulethe malunga ne-450 mg ye potassium. Akuyinto into ofuna ukuxhalabisa ngayo ngaphandle kokuba uthabathe iqela lamabhanana kuwo wonke umhlaba. Njenge-kitty litter, ibhanana inokubangela ukuba kuqaphele ukukhanya kweemitha kubaphathi abafuna izinto zenukliya.
Musa ukucinga ukuba iibhanana kunye neentsimbi zaseBrazil ziphela kuphela ukutya okusasazwayo. Ngokwenene, naluphi na ukutya okuphakamileyo kwi-potassium ngokwemvelo luqukethe i-potassium-40 kwaye luhamba kancane, kodwa lukhulu kakhulu. Oku kubandakanya amazambane (i-frenchactive fry fries), izaqathe, ubhontshisi be-lima kunye nenyama ebomvu. Iinqathi, amazambane kunye nobhontshisi bamalamula ziqulethe i-radon-226. Xa ufika kuwo, zonke ukutya ziqulethe i-radioactivity. Uyadla ukutya, ngoko ke uhamba nge-radioactive, nayo.
Iimvumi zomshukela omshushu
Uninzi lwezinto zokubhema umsi ziqulethe imithombo yomsakazo omncinci-241. I-Whitepaw, ummandla woluntu
Phantse i-80% ye-detectors yomthamo ophantsi iqulethe inani elincinci le-isotope yamericium-241 e-radioactive, ekhupha i-particle ye-alpha kunye ne-beta. I-Americium-242 ine- half-life of 432 iminyaka, ngoko ayiyi ndawo naliphi na ixesha kungekudala. I-isotopi ifakwe kwi-detector yomsi kwaye ingabikho mngcipheko wangempela kuwe ngaphandle kokuba uchithe umtshini wakho womsi kwaye udle okanye uphuse umthombo omsakazo. Ingqwalasela ebaluleke kakhulu ukulahlwa kwezinto zokubhema komsi ukususela ekubeni i-americium ekugqibeleni iqokelelwa kwiifowuni okanye phi na apho i-detector ilahlekelwe khona.
Izibane ze-Fluorescent Emit Radiation
Ivan Rakov / EyeEm / Getty Izithombe
Izibane zokuqala zezibane zezibane ezifake i-fluorescent ziqulethe i-bulb encinci yeglasi ephethe i-krypton-85, i-beta kunye ne-gamma emitter ne-half-life of 10.4 iminyaka. I-isotope ye-radioactive ayikhathazeki ngaphandle kokuba i-bulb iphulwe. Nangona kunjalo, inetyhefu yamanye amakhemikhali ngokugqithiseleyo aphezulu kunoma yimuphi umngcipheko kwi-radioactivity.
Mina De La O / Getty Izithombe
Ezinye iimpawu zamatye, ezifana ne- zircon , zendalo ngokwemvelo. Ukongezelela, amaninzi amanqwanqwa angatshatyalaliswa ngeetyutheni ukuphucula umbala wabo. Imizekelo yemigangatho engabonakalisa umbala ibandakanya i-beryl, i-tourmaline kunye ne-topazi. Ezinye iadayimani yokufakelwa zenziwa nge-oxides zensimbi. Umzekelo yttrium oxide uzinzile ne-radioactive thorium oxide. Ngelixa uninzi lwezinto eziluluhlu alukukhathazekanga nakakhulu apho ukuvezwa kwakho kubandakanyeka khona, ezinye iigemstones eziphathekayo zikarhulumente zigcina "ukukhanya" ngokwaneleyo ukuba zitshise ngokukhawuleza kwi-0.2 milliroentgens ngeyure. Ngaphezu koko, unokugqoka iimpawu ezikufutshane kwesikhumba sakho ixesha elide.
USteffen Leiprecht / STOCK4B / Getty Izithombe
Usebenzisa i-ceramics yonke imihla. Nangona ungasebenzisi i-stoneware yamandulo (efana ne- Fiesta Ware enemibala), unethuba elihle lokuba neekeramics ezikhupha i-radioactivity.
Umzekelo, unayo i-cap okanye i-veneer kumazinyo akho? Amanye amazinyo e-porcelain ayenemibala enobumba kunye ne-uranium equkethe i-oxide yensimbi eyenze ibe mhlophe kwaye ibonakalise ngakumbi. Umsebenzi wamazinyo unakho ukubeka umlomo wakho kwimitha engama-1000 ngonyaka ngemoto nganye, ephuma kumaxesha amabini nesigxina umzimba oqhelekileyo ukukhutshwa kwindalo kwindalo yemvelo, kunye ne-radi-rays ezimbalwa.
Nantoni na eyenziwe ngamatye ingaba yingozi. Ngokomzekelo, iileyile kunye nee-countertraps ze-granite zincinci. Ngoko ke ikhonkrithi. Izakhiwo zangasese ezikhonkco ziphezulu kakhulu kuba ufumana i-radon ephuma kwikhonkrithi kunye nokuqokelelwa kwegesi ene-radioactive, eyona yimbi kunomoya kwaye ingaqokelela.
Abanye abaphulaphuli baquka igalari yobugcisa, ubucwebe begolide kunye neebumbi zobumba. Ubumba kunye neendwanguzo zixhalabisa ngenxa yokutya okucokisekileyo kunganciphisa ixabiso elincinci lezinto ezinokusasaza ukwenzela ukuba unganxibe. Ukugqwesa iingubo zomsakazo esondele kwesikhumba kuyafana, apho i-acids elukhumbeni yakho ichitheka izinto, ezinokuthi zixutywe okanye zitshiswe ngengozi.
Iimveliso eziLungeleleneyo eziKhutshwayo
I-metal cheese graters, njengezinto ezininzi, inokwenziwa kwintsimbi ephinda yenziwe. UFrank C. Müller, iCredit Commons License
Sonke sifuna ukunciphisa impembelelo yethu kwimeko. Ukusetyenziselwa ukubuyisela kuhle, akunjalo? Ngokuqinisekileyo, kukuthi, ngokude nje uyazi ukuba uyiphi indlela yokuphinda uphinde uyisebenzise. Isitraba esinqabileyo sinokuhlanganiselwa ndawonye, ​​oku kuye kwabangela umdla oluthile (ezinye ziza kuthi ziyihlazo) iingxowa zentsimbi ye-radioactive ifakwe kwizinto eziqhelekileyo zendlu.
Ngokomzekelo, emva ko-2008, kufunyenwe i-grater-emitting cheese grater. Kubonakala ukuba, i-cobalt-60 yafumana indlela yayo kwisitye esetyenziselwa ukwenza igranti. Amatafile esinyithi abonakele kunye ne-cobalt-60 atholakala ehlakazekile kwiindawo ezininzi.
Izinto ezikhazimulayo ezixhalabisayo
Basem Al Afkham / EyeEm / Getty Izithombe
Mhlawumbi unayo iwashi endala ye-radium-dial okanye ubukele, kodwa kukho ithuba elihle lokuba ne-tritium-lighted object. I-Tritium i-hydrogen isotope yomsakazo. I-Tritium isetyenziselwa ukwenza izibhamu eziqhumayo, iifomas, ubuso obukelekileyo, ii-fobs eziphambili kunye nezibane ezizimeleyo.
Ungathenga into entsha, kodwa ingaquka ezinye iinxalenye zevini. Nangona ipende ye radium ingasetyenziselwa kwakhona, iinxalenye ezisuka kwiindawo ezidala zifumene ubomi obutsha kwizinto zokugqoka. Ingxaki apha kukuthi ubuso obukhuselayo bewashi okanye nayiphi na into ekhutshweyo, ukuvumela ipeyinti ene-radioactive ukuba ifake okanye ikhuphe. Oku kungakhokelela ekuboniseni ngengozi.
Kutheni Kuthiwa Ikhofi Yenza I-Poop?
I-Baking Powder isebenza njani ekuphekeni?
I-SUNY i-Admissions ePotsdam
Iindlela Ziphi iilwimi zesiSpeyini nesiNgesi ezahlukileyo
Iingoma eziMdaniso eziphezulu ze-2009
Isikhokelo seMbali kunye nesimboli seKarate kunye neeNdidi zayo
Ngaba Isono Sokuxhatshazwa?
I-Citadel GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iprogram yebhokisi yeDialog ye-Password
Ngaba Disneyland Ivule nini?
Iimvelaphi ezintle zokunqoba kwiCasino